Xorgoble Qardho oo ku guuleysatay Ciyaar hor u dhac u aheyd finalka Kadiska – SBC
Xorgoble Qardho oo ku guuleysatay Ciyaar hor u dhac u aheyd finalka Kadiska
Posted by Webmaster on August 30, 2012 Comments
Iyadoo Caawa loo balansanyahay Xaflada gabagabada Kediska Ramadaanka SBC islamarkaana ay isku arkidoonaan xaafadaha Laanta Hawada Boosaaso iyo Xorgoble Qardho ayaa waxaa ka hor dhacday ciyaar aad u xiiso badneyd taasi oo aheyd mid kubadda cagta ah.
Ciyaartaasi oo bilaabatay abaare 4:00 galabnimo ayaa waxaa labada koox oo ku kala ciyaarayay Laanta Hawada Vs Xorgoble ay is weydaarsadeen ciyaar aad u quruxbadan iyadoo weerar iyo weerar celis ay qeybtii hore Gool quruxbadan la timid Kooxda ku ciyaareysay Xorgoble Qardho.
waxaa loo guda galay dhamaadka wareegii hore ee ciyaarta iyadoo lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaamineyso Kooxda Xorogoble Qardho.
Ka dib isku soo laabasho waxaa dib u bilaabtay weerar iyo weerar celis iyadoo laacibiinta Xaafada Laanta Hawada ay kubado kul kulul ku garaacayeen gool hayaha kooxda Xorgoble, waxaana taasi ay sababtay in dhamaadka ciyaarta ay goolkii barbar dhaca la yimaadaan Laanta hawada Boosaaso.
Waxaa sidaasi ku soo gaba gaboobay Ciyaartii labada xaafadood ee caawa ku tartami lahaa tartan aqooneedka Kediska Hor u dhaca u aheyd waxaase loo gudagalay tuurashada gool ku laadyo lagu kala saarayo labada xaafad.
Waxaa halkaasi 4 iyo 1 guushii ku raacday Xaafada Xorgoble Qardho, Waxaana halkaasi lagu gudoonsiiyay Koob aad u quruxbadan.
waxaa noo balan ah tartan aqooneedka xiga ee caawa dhexmari doona labadan xaafadood waa xaafada xorgoble Qardho Vs Laanta Hawada Boosaaso oo goor dhow isagana bilaaban doona.